अहिलेसम्म मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओमा कति पर्यो आवेदन ? Bizshala -
अहिलेसम्म मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आइतबार साँझसम्म मागभन्दा ३५.३१ गुणा बढी आवेदन परेको छ।
गत साउन १४ गतेबाट यो कम्पनीले कुल ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको छ। जसअनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका कुल ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ।
सीडीएससीका अनुसार आज साँझ सवा ५ बजेसम्म यो आईपीओमा १७ लाख ७६ हजार ७११ आवेदकबाट २ करोड ४१ लाख ८३ हजार ४८० कित्ता माग भएको हो। यो हिसाबले यो आईपीओमा मागभन्दा ३५.३१ गुणा बढी कित्ताका लागि आवेदन परेको छ।
यो आईपीओको निष्कासन बन्द भोलि साउन १८ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।